Indawo yokuhlala abafundi - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Ukukusiza ekutholeni indawo efanele yokuhlalaIndawo yokuhlala yabafundi
HLALA NJENGOKUTHENGAISIVIVINYO SESIFUNDI
Indawo yokuhlala inketho yabafundi abajabulela ukuzimela nobumfihlo bokuzihlalela. Uzoba negumbi langasese noma elabiwe, ngokwesicelo sakho esithile. Ngokuya ngenketho ekhethiwe, izikhungo zasekhishini, zokugeza nezokuhlanza zizokwabelana nabanye abafundi. Kufanele ugcine okungenani izinyanga ezi-2 - 3 ngaphambi - ngoba amabala ancishisiwe futhi angabhukwa kuphela inyanga eyi-1 noma ngaphezulu.
Lolu hlobo lwendawo yokuhlala lutholakala kuphela kubafundi beminyaka engu-16 +.
Itholakala ibanga lokuhamba ukusuka kwikhampasi yethu eyinhloko, Evo iyindlela yokukhetha ephezulu neyasemadolobheni yabafundi abafuna ukukhiqiza ngempela phakathi nosuku futhi bazijabulise ngokoqobo ebusuku. Evo yakhelwe ngqo izitshudeni, eziqukethe izinsiza zesimo sempilo ephilile, engabizi futhi ehlanganisa konke indlela yokuphila yomphakathi.
Evo eduze kwedolobha, ichweba lakudala, iLachine Canal nezinye izinto eziheha izivakashi nezamasiko. Inqwaba yemigoqo yezemidlalo namakhekhe aseceleni komgwaqo nawo aseduze. Uzokwazi ukufinyelela ngqo kwiMetro.
Ungajabulela ka-evo Igumbi lomdlalo, hlangana nabangane abasha emalokishini noma ekhishini, noma ungahambi kahle ngesikhathi sokuphumula egumbini lokudlala noma yokudlela. Ungashaya futhi indawo yokuzivocavoca, uhambe ubhukuda noma uthathe ikilasi le-yoga ukuze uhlale ulungile, vakashela umtapo wezincwadi, elebhu lekhompyutha, izikhungo zokufunda kanye nendawo yokuphrinta ukuze uhlale phezulu ekilasini lakho.
Ikamelo elilodwa noma elihlanganyela
Amakamelo anomoya opholile futhi afakelwe ifenisha
Hlanganani izindawo zokuphumula namakhishi anakho konke okusemandleni
Igumbi lokuhlanza ($ $)
I-Wi-Fi yamahhala nekhebula
Ukushisa, amanzi ashisayo, nogesi kufakiwe